Dreame အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（27.4MB） ယခင်ဗားရှင်း
Dreame - အကောင်းဆုံးအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုဖတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Dreame (www.dreame.com) - အစဉ်အမြဲဖတ်ရှုနိုင်သောအကောင်းဆုံးအက်ပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆုပ်ကိုင်ထားသောပုံပြင်များ၏ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုလုံးကိုလက်ခံရန်နှင့်ဆုများစွာရရှိရန်ယခုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ သင်ဤသည်ကိုဘယ်တော့မှမေ့မည်မဟုတ်ဟုကတိပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အက်ပလီကေးရှင်းတွင်ရရှိနိုင်သည့်စူပါဆုများ။ - ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရုံဖြင့်အနိုင်ရရန်နီးစပ်လိမ့်မည်! ၀ ံပုလွေ၊ ဘီလီယံနာ၊ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်းနှင့်အခြားအရာများများစွာပါရှိသည်။ - မရေမတွက်နိုင်သောပုံပြင်များ - သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးထောက်ခံချက်! - လျင်မြန်စွာအဆင့်မြှင့်တင်မှုများ - နေ့စဉ်ပုံပြင်များကိုအခမဲ့ update များ - သန်းနှင့်ချီသောစိတ်တူစာရှုသူများ -
Reader Groups - တက်ကြွသောစာအုပ်ချစ်သူများနှင့်သင်၏အတွေးအမြင်များကိုမျှဝေပါ။ - စာဖတ်သူများ၏အကျိုးကျေးဇူးများ - ဖတ်ခြင်းနှင့်အခမဲ့ရယူခြင်း ဆုများ!
လူအများအပြားပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်ရန်သင့်ရဲ့အဖြစ်အပျက်များကိုဖတ်ပါ။ - ကျယ်ပြန့်သောသင်တန်း - သင်ခန်းစာများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်လမ်းညွှန်များနှင့်ပို။ ပိုများသည်။ - ပို၍ ကြီးမားသောထိတွေ့မှု - သန်းချီသောစာဖတ်သူများကိုလက်လှမ်းမီခြင်း - မကြာခဏအရောင်းအ ၀ ယ်အခွင့်အလမ်းများ
INS / Twitter: dreamestory
How to maintain Dreame V11 cordless vacuum.
Dreame V11 - handheld vacuum cleaner
Dreametech Dreame T10 Cordless Stick Vacuum Review Demo & Maintenance Tips